Imibuzo evame ukubuzwa - iRaymin Display Products Co, Ltd.
Yini okufanele siyenze ukuze sibambisane?
Njengoba iningi lephepha lethu le-FSDU nebhokisi lezipho eliqinile lenziwe ngokwezifiso, imvamisa siqala esakhiweni sokuklanywa nosayizi wamakhasimende. Kulesi sigaba, sidinga imininingwane yemininingwane yemikhiqizo yakho (usayizi, isisindo, ukuthi ungayibonisa kanjani) noma usithumelele amasampula ambalwa womkhiqizo ukuze usetshenziselwe ukuklama
Ungakwazi ukunikeza isampula?
Yebo, isampula emhlophe noma isampula yombala ngokunyathelisa i-ink-jet. Senza ukwakheka okokuqala ukuze ikhasimende liqinisekise, bese sinikeza isampula emhlophe yokuhlekisa ukuze ubheke usayizi, ikhwalithi yephepha, ikhono lokusekela isisindo. Ngemuva kokuba isakhiwo siqinisekisiwe, sizonikeza ikhasimende umugqa wokufa ukuze wenze ubuciko. Imvamisa, kuyikhasimende elenza umsebenzi wobuciko wokubonisa noma ibhokisi lokupakisha, uma ikhasimende linenkinga noma lingenawo umklami wokwenza lokhu, singabasiza inqobo nje uma behlinzeka ngesithako sobuciko esiyisisekelo kithi. Okulandelayo ukwenza isampula lombala ngaphambi kokukhiqizwa kwenqwaba, ukuze kuhlolwe okuqukethwe kobuciko kufakwa kahle ebhokisini lokuboniswa lukathayela nebhokisi lekhwalithi ephezulu.
Siyini isikhathi sokuhola sesampula?
Izinsuku ezingu-1-2 zesampula emhlophe nezinsuku eziyi-3-4 zesampula yombala.
Singakwazi yini ukusebenzisa isampula ekhombisa inki ye-ink-jet ephrintiwe noma ukupakisha kwephepha lekhwalithi ukuhlola umbala ekukhiqizeni ngobuningi?
Cha, ngoba ihluke ngokuphelele ekuphrintweni kweglue ekukhiqizweni ngobuningi, ngakho-ke umbala uzohluka kakhulu kunemibala yokukhiqiza ngobuningi. Uma ufuna ukubona ukuthi umbala uzobukeka kanjani ekukhiqizeni ngobuningi, sizonikeza ikhasimende ngo-A3 noma ngosayizi wokuphrinta osayizi ongu-95% osondele kumbala ekukhiqizweni.
Ngabe sidinga ukukhokhela isampula?
Yebo. Imvamisa kungu-50 $ wesampula emhlophe no-100 $ wesampula lombala, kepha lokhu kungadonswa kunani eliphelele le-oda lapho i-oda liqinisekiswa,.
Usithumela kanjani isampula?
Sivame ukuthumela nge-akhawunti yekhasimende le-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT. Uma ungenayo i-akhawunti yekhuriya, singahlela ukulethwa ngokusebenzisa insizakalo yethu ye-ejenti ebiza imali ephansi kakhulu kunekhuriya elisemthethweni, futhi usikhokhela imali yekhuriya, esizoyibuyisela kumenzeli weposi. Ngale ndlela kubiza imali ephansi kakhulu kodwa isikhashana ukuthola iphasela.
Siyini isikhathi sokuhola se-bulk?
Kuyizinsuku eziyi-12-15 zombili ukubonisa kwe-PDQ nebhokisi lephepha lekhwalithi lokukhiqiza ngobuningi.
Ingabe uyanikela ngensizakalo yokuhlangana ukuze uboniswe?
Yebo, siyakwenza. Ikhasimende lithumela imikhiqizo yabo kithi, sisiza ukuhlanganisa kahle izibonisi zabo ze-POS, sibeke imikhiqizo futhi sigcwalise amabhokisi esikhaleni esingenalutho uma kunesidingo. Ekugcineni Sinebhokisi elingaphandle elinzima ngokwanele futhi ama-V-board apakisha sonke isibonisi. Vele sizokhokhisa imali encane yabasebenzi ngale nsizakalo.
Uma ikhasimende libhekana nobunzima bokuhlanganisa isibonisi sikathayela, ungasiza kanjani?
Sivame ukucabanga ukuklama izakhiwo zokubonisa ze-POP ngokuhlangana kalula, bese sinikeza isiqeshana sephepha lesandla ebhokisini ngalinye lokupakisha. Uma ikhasimende lingazi nakancane ukuthi lingahlangana kanjani, sizothatha ividiyo emfushane ukuyikhombisa indlela yokwenza igxathu negxathu
Ikheli: 6th floor, No. 6348, Bao'an Ave., Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CN 518103